Patrick Awuah, yɛ Ahyɛasi Sukuupɔn - sukuu a ɛnhwehwɛ sika mu na ɛde ne ho fi aban ho - no hyehyɛfo ne ne kannifo a ɛwɔ Nkran, Ghana no, na wɔbue sukuu yi wɔ afe 2001 mu na ne sukuufo no wie wɔ 2005 mu. Ɛbere a ɔtenaa United States ɛkɔ bɛyɛ mfe aduonu no, Awuah san n'akyi baa Ghana, beae a ɔbesii Ahyɛasiɛ Sukuupɔn no. Nnipa a ɔde fii sukuupɔn no ase yɛ 30 pɛ, nanso nnɛ, ɔwɔ sukuufoɔ bɛboro 791. Awuah adi mfe 47, wɔaware ɔwɔ mma mmienu.
Asɛmfua Ahyɛasiɛ (a ɛkyerɛ "mfitiase" wɔ Akan, Ghana kasa biako mu no) yɛ sukuupɔn a wɔde mfe anan na ɛkɔ a efi ase fi guadi kosi tɛknɔlɔgi ne akanni ho nsɛm
Patrick G. Awuah, Jr. ayɛ adwuma pɛn sɛ "Program Manager" ama Microsoft nkorabata a ɛwɔ Seattle no atoa so a ɛkɔ bɛyɛ mfirihyia du bere a ɔfii ne man mu bere na ɔyɛ aberantewa no. Ɔdii nea wɔfrɛ no dial-up kɔmputa tɛknɔlɔgi ho nsɛm bere a na ɔyɛ adwuma wɔ Microsoft no. Awuah fii ase nyaa sika ɔpepem pii bere mpo a na ɔnya mfe aduasa. Ne nyinaa mu no, ɔgyaw adwuma a na sika wom sɛɛ too hɔ.
Awuah kɔɔ United States sɛ ɔrekɔ sukuupɔn. Bere a na ɔwɔ Amerika no, ɔbɛyɛɛ ɔwofo na ɛno ma osusuw hia a Afrika ho hia ma ne mma ntetee ne ne mma mma ho. Awuah dwene ho sɛ ɛnde ɔbɛba n'akyi aba Afrika, ne man Ghana na wɔabɛyɛ biribi de aboa ama ne man anya nkɔso wɔ sikasɛm mu ne afei wɔn sukuu nsɛm mu. Ɔtee nka wɔ ne komam sɛ na ɛho hia sɛ wɔsakra Ghana sukuukɔ mu nsɛm, a ɔn sukuukɔ mu na wɔatwe adwene asi akannifo a wɔwɔ tema na ɛno bɛma ne man Ghana atu mpɔn paa.
Ɔkura Bachelor Abodin Krataa wɔ Engineering ne Sikasɛm mu a ɔnyaa wɔ Swarthmore Sukuupɔn ne MBA a ɔnyaa wɔ UC Berkeley's Haas Sukuu a wɔkyerɛ Guadi. Wɔ 2004 mu no, Swarthmore maa Patrick abasobɔde esiane ne akanni wɔ Afrika sukuupɔn adesua nsɛm mu.
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Awuah,_Jr.&oldid=27997"